नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको हिमोफिलिया जनचेतना • nepalhealthnews.com
नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको हिमोफिलिया जनचेतना
सन्देश श्रेष्ठ / जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ || प्रकाशित मिति :2019-04-16 11:32:23
ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर हस्पिटलले हिमोफिलिया सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
विश्व हिमोफिलिया दिवस अवसर पारेर अस्पतालले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । हरेक वर्ष अप्रिल १७ मा संसारभर विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ । यस वर्ष ‘पहुँच र पहिचान’ भन्ने मुल नारा तय गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्नुहुदैँ नेपाल हेमोफेलिया सोसाइटिका पुर्व अध्यक्ष वेद राज ढुङ्गानाले अझै समाजमा हिमोफिलियाका बिरामीलाई हेयको दृष्ट्रिले हेर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘पुरुषहरु पिडित हुन्छन भने महिलाहरु हिमोफिलियाका क्यारियर हुन् । विवाह पश्चात हिमोफिलिया भएको छोराछोरी जन्मेमा महिलालाई माइतिबाट पठाएको दाइजो भनेर अपमान र हेला गरिन्छ ।’ राज्यले अन्य ठाउँमा लगानी गरिरहँदा हिमोफिलियाको उपचारको लागि अहिलेसम्म कुनै लगानी नगरेको गुनासो पोख्नुभयो । हिमोफिलियाका बिरामीको पनि बाच्न पाउने अधिकार भएकाले राज्य यस प्रति गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुदिप श्रेष्ठले हिमोफिलियाको डायग्नोसिस र उपचार गर्न चुनौति भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ –‘उपचारको लागि चाहिने स्रोत साधन पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । नेपालमा रगत सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरहरुको अभाव छ ।’ हिमोफिलियाको आवाजलाई बुलन्द पार्न नेपाल हेमोफेलिया सोसाइटिसँग सहकार्य गर्न तयार भएको जानकारी दिनुभयो । रक्त क्यान्सर र हिमोफिलियाको उपचार गर्न उपकरण र जनशक्ति लगभग एउटै भएकाले सहकार्य गरेर अघि बढ्न सबैलाई अग्रह गर्नुभयो ।
विश्व हेमोफेलिया महासंघको तथ्याङ्क अनुसार संसारभर ४ लाख हेमोफेलिया युक्त व्यक्ति रहेका छन् । नेपालमा ३ हजार जति भएको अनुमान छ । अहिले सम्म ६ सय ७० जना नेपाल हेमोफेलिया सोसाइटीको सम्पर्कमा छन् । हेमोफेलिया रोगको समयमा डायग्नोसिस भइ उपचार पाएमा उनीहरुले सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने रक्तरोग विशेषज्ञ डा. अमित श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
तर समयमा रोगको पहिचान र उपचार नपाएका कारण उनीहरु अपाङ्ग भएर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । ‘यो जनचेतनाको अभाव हो ।’ –डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ–‘डायग्नोसिस सेन्टरको कमी र उपचारका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अभावले हेमोफेलियाको उपचारमा चुनौति थपिएको छ ।’
केही विदेशी औषधि कम्पनिहरुले आफ्नो औषधि प्रचारप्रसारका लागि केही उत्पानहरु वल्र्ड हिमोफिलिया फेडरेसनलाई दिने गर्छन् । फेडरेसनले नेपालजस्ता कम विकसित देशहरुलाई आकस्मिक अवस्थाका लागि यस्ता औषधि निःशुल्क पठाइदिन्छन् । औषधि बचाएर राख्नुपर्दा म्याद गुज्रिन्छन् । नेपालका हिमोफिलियाका कतिपय बिरामीले ब्लडबाट बनेको प्लाज्मा लगाउँछन् । तर यो कामचलाउ मात्र हुन्छ, प्रभावकारी हुँदैन । सानो रक्तस्रावमा पनि धेरै लगाउनुपर्छ र शरीरमा अनावश्यक तत्व बढी पर्ने हुन्छ । गम्भीर अवस्थामा एन्टीहिमोफिलिक फ्याक्टर नै चाहिन्छ । ब्लिडिङ भएर सुन्निएको जोर्नीमा आइस (वरफ) ले सेक्नु प्रारम्भिक हेरचाह मात्र हो ।